Iingcebiso ezi-5 zokuthatha iincwadana ezinemifanekiso malunga neshishini lakho Martech Zone
Iingcebiso ezi-5 zokuthatha iincwadana ezinemifanekiso malunga neshishini lakho
NgeCawa, ngo-Epreli 12, 2015 Douglas Karr
Iphepha lakho lokuthengisa, ikhithi yemidiya, incwadana, iPDF, incwadana yemveliso… nantoni na onqwenela ukuyibiza, ifuna uncedo. Kutshanje sihlanganise Imithombo yeendaba kunye nenkxaso yenkxaso yesiza emva kwesicelo emva kokuba kwenziwe isicelo.
Inyani yile, abantu basakuthanda ukukhuphela kunye nokuprinta amaxwebhu kwaye sisakuthanda ukuhambisa iimveliso zokuprinta ngesandla. Ungayichazanga eyokuba isiqwenga esihle sokuprinta sinokufumana ingqwalaselo. Kujika ukwahlulahlula kwaye uninzi lweposi ethe ngqo kunye nemikhankaso yokuhambisa ngokuthe ngqo ibona ukunyuka kwempendulo kuba akukho khuphiswano lukhulu phaya.
Ufuna ukuprintwa eIreland kuvelise le infographic ukubonelela ngeengcebiso eziya kukunceda ufumane ingqalelo ngakumbi kwinkcitho yakho, Ukudala iLeaflet yeShishini egqibeleleyo.
Yazi ukuba uza kuthini, ngubani othetha naye, indlela yokuyithetha, jonga ubuchwephesha kwaye ungabavumeli bahlale bengasebenzi. Ubungakanani, umxholo, ukwakhiwa kwesivakalisi, imifanekiso, imibala kunye - uninzi lwazo zonke - ukubizelwa inyathelo, kubalulekile kwincwadana enkulu yokusebenza. Sikwacebisa ukuba usebenzise uhlobo oluthile lokulandela umkhondo kwefowuni okanye i-URL enokulandeleka kwisiqwenga ukuze wazi ukuba zeziphi ezenza ngcono kunabanye.
Ufuna ukuprintwa kucebisa iFomula ye-AIDA:
ingqalelo - Yenze ibambe amehlo.
umdla -Gcina umfundi enomdla.
umnqweno -Yakha umnqweno usebenzisa imifanekiso ekholisayo kunye nolwazi.
inyathelo -Khuthaza umfundi ukuba athathe amanyathelo.
tags: wasizaincwadanauyilo lwencwadanaincwadanaikethi yeendabaUfuna ukushicilelwaIsidingoiphepha elinyeuyilo lwephepha elinyepdfincwadana yemvelisoiphepha lokuthengisa elinyeikhithi yenkxaso
Epreli 21 yiGoogle's Mobilegedden! Uluhlu lwakho lokuKhangela kwi-SEO yeselfowuni